Kambani yekuchata ndege yeUK Chapman Freeborn inovhura hofisi nyowani yeMoscow
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Kambani yekuchata ndege yeUK Chapman Freeborn inovhura hofisi nyowani yeMoscow
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Kambani yekuchata ndege yeUK Chapman Freeborn inovhura hofisi nyowani yeMoscow.
Russia imusika uri kusimukira nekukurumidza uye uri kukura mune zveupfumi. Pachinyakare maindasitiri makuru anga ari emafuta negesi, migodhi nekugadzira muchina. Chapman Freeborn anoona kuvaka kwendege, kugadzirwa kwemuchadenga uye tekinoroji semaindasitiri ari kukura, pamwe nemotokari uye zvekutakura.
Hofisi yeMoscow kutsigira kukura uye zvirongwa zvekuwedzera mukupindura kukurumidza kusimudzira musika weRussia.
Chapman Freeborn akagadza Maxim Tsarev seDirector General, Russia kutungamira bhizinesi munzvimbo itsva iyi.
Chapman Freeborn Russia ichatarisa pane zvitatu zvakakosha zvechigadzirwa nzvimbo: Cargo, Passenger uye Private Jets uye OBC (Pabhodhi Courier).
Nyanzvi yezvekuchata ndege dzepasi rose Chapman Freeborn, chikamu cheAvia Solutions Group, chinovhura Moscow hofisi yekutsigira kukura uye zvirongwa zvekuwedzera mukupindura kukurumidza kusimudzira musika weRussia. Chapman Freeborn akagadza Maxim Tsarev seDirector General, Russia kutungamira bhizinesi munzvimbo itsva iyi.
Eric Erbacher, Chapman Freeborn CEO anoti:
"Rashiya musika uri kusimukira nekukurumidza uye uri kukura mune zveupfumi. Pachinyakare maindasitiri makuru anga ari emafuta negesi, migodhi nekugadzira muchina. Isu tinoona kuvaka kwendege, kugadzirwa kweaerospace uye tekinoroji semaindasitiri ari kukura, pamwe nemotokari uye zvekutakura.
Kutama kwekuvhura hofisi muMoscow chikamu chekukura kwedu kwenguva refu uye zvirongwa zvekuwedzera. Kuve neChapman Freeborn akamira muMoscow kunotitendera kushanda zvirinani nevatakuri vekutakura zvinhu uye kutsigira misika iri kukura nekupa kwedu zvigadzirwa. ”
Maxim Tsarev anojoinha bhizinesi zvichitevera makore gumi kuDSV Global Transport uye Logistics, kwaakafambira mberi kusvika pachinzvimbo cheDSV Air & Sea Russia Mutevedzeri, Managing Director.
Maxim Tsarev anoti:
“Ini ndagara ndichiwana kutakura zvinhu nendege chikamu chekutakura uye kutakura zvinhu zvinonyanya kunakidza uye zvinonakidza. Iyo inomhanya-mhanya uye ine simba, uye iwe unogona kuona ipapo mibairo kubva kune kufambisa kwemhepo. Pakamuka mukana wekuti ndijoine Chapman Freeborn, Ndakasvetukira pazviri - kuve nechekuita kubva pakutanga, nekuvhurwa kwehofisi nyowani pano muMoscow, uye mukana wekuvandudza nekutungamira zano remusika weRussia idambudziko rinonakidza.